Ulwimi olungcolileyo lweziqendu ezithile zeCarpool Karaoke yayisesona sizathu siphambili sokulibaziseka kwephambili yayo | Ndisuka mac
ICarpool Karaoke ibe yeyesibini, kwaye okomzuzwana ukubheja kokugqibela kwimveliso yakho yesiqulatho sokuqala. Ekuqaleni konyaka, u-Apple uphawule ngokupapasha kwi-Apple Music iziqendu ezahlukeneyo zembonakalo yenyani Iplanethi yeZinto, umboniso wokwenyani I-Apple yanisa izinti ezininziUkuqala ngabasasazi, ababengenalo nofifi lokuba uyintoni na isicelo okanye umsebenzi oqulathiweyo.
Inzame yesibini, ephumelele ukugxekwa okuninzi, nangona ubukhulu becala yiCarpool Karaoke, inkqubo apho Abantu abadumileyo bathabathe ukukhwela imoto ngelixa bethetha ngomsebenzi wabo, benza iziqhulo ... Olu luhlu luqale ngokusesikweni nge-8 ka-Agasti kwaye kwiveki nganye iApple inika isahluko esitsha esikhethekileyo kwiApple Music.
Umhla wokuqala ocwangciselwe ukumiliselwa kwesiqendu sokuqala kwinyanga ka-Epreli. Kodwa, njengoko iBloomberg ifundile, esona sizathu sokulibaziseka kolu luhlu lutsha kungenxa yokuba UTim Cook wayefuna ukuphelisa ulwimi olukrwada nolungamanyala olwavela kwezinye zeziqendu, Ukunyanzela inkampani ukuba iphinde idibanise iziqendu ngokusika iindawo "ezingafunekiyo". Njengoko sinokufunda eBloomberg
Kwiintsuku ngaphambi kokuba u-Apple acwangcise ukubhiyozela ukwaziswa kwenkqubo yakhe yesibini kumabonakude ophelileyo kwihotele yaseHollywood, u-CEO uTim Cook uxelele amasekela akhe ukuba ulonwabo kufuneka lulindile. Ulwimi olungcolileyo kunye nezalathiso kucoceko lobufazi kuye kwafuneka zisikwe kwezinye iziqendu zeCarpool Karaoke
Olu tshintsho lunokubandakanya uhlobo lomgca wokuhlela oya kulandelwa yiyo yonke imveliso ka-Apple ukusukela ngoku, ukuba ke iqinisekisiwe, I-Apple iyakwenza kuphela umxholo onokuyonwabela nosapho, ushiye bucala isini kunye nobundlobongela, ezinokubangela ukuba impumelelo kuthotho lwakho ibe isihlobo. Oko akuthethi ukuba isondo okanye ubundlobongela buyimfuneko ukuba okanye ukuba kuyimveliso, kodwa ukuba siyema ukubona impumelelo enkulu yeNetflix okanye i-HBO, sibona ukuba isini kunye nobundlobongela ziyinxalenye yazo, ngaphandle kwezinto ezingamkelekanga., izinto njengoko zinjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ulwimi olungcolileyo lweziqendu ezithile zeCarpool Karaoke sesona sizathu siphambili sokulibaziseka kwenkulumbuso
Nazi iimveliso ze-Apple eziyilwe ngokutsha ngescreen njenge-iPhone X